सोल्टी, तारागाउँ र ओरियन्टल होटलमा कुनको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेप्सेमा सूचीकृत सोल्टी, तारागाउँ र ओरियन्टल होटलले खासै प्रगति गर्न सकेका छैनन् । यसअवधिमा होटलहरुको प्रमुख वित्तीय सूचकहरु घटेका छन् । नाफा खसकिदो छ भने प्रतिसेयर आम्दानी पनि घटेको छ ।
लाजिम्पाट काठमाडौंमा अवस्थित ¥याडिसन होटल सञ्चालन गरिरहेको ओरियन्टलले होटलको ४० कोठाहरु पुननिर्माणका लागि बन्द भएको तथा तारे होटलमा बस्ने पर्यटकको संख्यामा समेत कमी भएकाले नाफा घटेको दाबी गरेको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले गत जुनमा भएको श्रमिक आन्दोलनका कारण नाफा प्रभावित भएको जनाएको छ । तथापि, भ्रमण वर्ष २०२० ले होटलको नाफा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यता, सोल्टीले होटलमा कुनै अन्तरिक समस्या नरहेको बताए पनि वित्तीय सूचक सकारात्मक देखिएको छैन । हेरौं, असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो ?
सोल्टी र ओरियन्टलको चुक्ता पुँजी बढ्यो
असोज मसान्तसम्ममा सोल्टी र ओरियन्टलको चुक्ता पुँजी बढेको छ । ओरियन्टलको पुँजी १४.९९% ले बढेर १ अर्ब ७ करोड ४३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सोल्टीको पुँजी १०% ले बढेर ७३ करोड २६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । यता, तारागाउँ रिजेन्सीको पुँजी गत वर्षकै यथावत रहेको छ । यद्दपि, यो सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी भएको होटल हो । यसको पुँजी १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
३ वटै कम्पनीको जगेडा कोष बढ्यो
पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा तीनवटै होटलले जगेडा कोष बढाएका छन् । सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बढाउनेमा तारागाउँ रिजेन्सी रहेको छ । यसको जगेडा कोष १४.५७% ले बढेर ५५ करोड २ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यता, ओरियन्टल होटल्सको जगेडा कोष ३.६७% ले बढेर १ अर्ब २० करोड २३ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
३ वटै होटलको कर अघिको नाफा घट्यो
नेप्सेमा सूचीकृत ३ वटै होटलको कर अघिको नाफा पनि घटेको छ । सबैभन्दा धेरै नाफा घट्नेमा ओरियन्टल होटल्स रहेको छ । यसको कर अघिको नाफा ६९.९१% ले घटेर १ करोड ६६ लाख ६३ हजार रुपैयाँमा आएको छ । यता, सोल्टीको कर अघिको नाफा ४९.२०% ले घटेर ३ करोड ७४ लाख ९३ हजार रुपैयाँमा आएको छ । तथापि, यो नै सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने होटल हो ।
सोल्टी र ओरियन्टलको कर पछिको नाफा घट्यो
असोज मसान्तसम्ममा सोल्टी र ओरियन्टलको कर पछिको नाफा घटेको छ । सोल्टीको नाफा ४९.१९% ले घटेर २ करोड ९५ लाख २६ हजार रुपैयाँमा आएको छ । ओरियन्टल होटल्सको नाफा ६७.५३% ले घटेर १ करोड ३१ लाख २२ हजार रुपैयाँमा आएको छ । यता, तारागाउँ रिजेन्सीले कर पछिको नाफालाई आफ्नो वित्तीय विवरणमा समावेश गरेको छैन ।
३ वटै होटलको रेभिन्यू घट्यो
सूचीकृत ३ वटै होटलको रेभिन्यू घटेको छ । यसैकारण सबैको खुद नाफा प्रभावित भएको हो । धेरै रेभिन्यू घट्नेमा तारागाउँ रिजेन्सी रहेको छ । यसको रेभिन्यू २२.२१% ले घटेर २० करोड ४७ लाख २७ हजार रुपैयाँमा आएको छ । यता, सोल्टी र ओरियन्टलको रेभिन्यू करिब १४% ले घटेको छ । यद्दपि, सोल्टी होटलको ३१ करोड ६४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ होटलहरु मध्येको सबैभन्दा धेरै रेभिन्यू हो ।
३ वटै होटलको प्रतिसेयर आम्दानी घट्यो, धेरै ओरियन्टलको
पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ३ वटै होटलको प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी घट्नेमा ओरियन्टल होटल रहेको छ । यस होटलको प्रतिसेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ ११ पैसाले घटेर १ रुपैयाँ २२ पैसामा आएको छ । सोल्टीको अंकित मूल्य १० रुपैयाँ रहेकाले सोही अनुसार प्रतिसेयर आम्दानी हिसाब गरिएको छ ।
सोल्टी र तारागाउँ रिजेन्सीको प्रतिसेयर नेटवर्थ बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सोल्टी र तारागाउँ रिजेन्सीको प्रतिसेयर नेटवर्थ बढेको छ । सोल्टीको नेटवर्थ १६ पैसाले बढेर २२ रुपैयाँ ६२ पैसामा आएको छ भने तारागाउँको प्रतिसेयर नेटवर्थ २ रुपैयाँ ८३ पैसाले बढेर १३३ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम भएको छ । यता, ओरियन्टल होटल्सको प्रतिसेयर नेटवर्थ १२ रुपैयाँ २२ पैसाले घटेर २११ रुपैयाँ ९१ पैसा रहन गएको छ ।
* तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले करपछिको नाफा आफ्नो वित्तीय विवरणमा खुलाएको छैन ।